Linn Ko: October 2013
Posted by Linn Ko at 11:41 AM No comments:
The one of best “Slinet Camera” for Android!
Posted by Linn Ko at 11:10 AM No comments:
Require Android 3.1 or Higher
Require Android 2.0.1 or Higher
(44.1 MB) for ARMv6 Device
Posted by Linn Ko at 1:52 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:39 PM No comments:
MMSD Smart Zawgyi v1.4 ကတော့ ကိုကျော်စွာသွင်ရေးထားတဲ့ Smart Zawgyi3ကိုအခြေခံထားတာပါ။
Change Your Samsung Galaxy Note 3's All Setting with Myanmar Fonts (For Myanmar Fonts not Included Phones)
Samsung Phone တွေမှာ Thai ဖက်က ထုတ်တယ့် ROM တွေနဲ့ဆိုရင် Original မြန်မာစာ ပါလာတတ်ပါတယ်... အဲ့ဒီအခါမှာ ဖုန်းရဲ့ Setting တွေကိုပါ မြန်မာစာ နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်..
အဲ့လို ပါလာတယ့် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာ လည်း မှန်တာကို တွေ့ရပါတယ်... အဲ အခုပြောမှာကတော့
ကားပြိုင်ဂိမ်းလေး အလန်းလေးတွေ.လို.တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လန်းတာတော့ တော်တော်လန်းတာ မြေပေါ်မှာ ပြိုင်ရတာ အားမရဘူးဆိုရင် ဘီးလုံးတွေခေါက်ပီး မိုးပေါ်မှာလေယာဉ်လို ပျံလို.ရတယ်။ဟိဟိ အရမ်းကို ပျော်စရာလေးကောင်းပီး စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးပဲ။ လန်းမလန်းသိချင်ရင်အောက်က Screenshot လေးကြည့်လိုက်နော်။
Posted by Linn Ko at 11:29 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 11:15 AM No comments:
Require Android 2.3.3 or Higher
Sea Game ခြင်းလုံးကစားနည်းလေးပါ …
Posted by Linn Ko at 2:11 PM No comments:
Download Apk Here (23.3 MB)
Download Apk Here (10.4 MB)
Download Cache Here (182.6 MB)
Download Apk Here (25.7 MB)
Download Cache Here (354 MB)
Posted by Linn Ko at 2:02 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 12:24 PM No comments:
1. You can takeascreenshot with just one tap on the screen or press power key and volume reducing key at the same time.
Require Android 2.3.3 or Higher.
Download Apk Here (38.5 MB)
Posted by Linn Ko at 5:48 PM No comments:
Download Apk Here (20.7 MB)
Posted by Linn Ko at 4:02 PM No comments:
Download Apk Here (14.7 MB)
Download Cache Here (65.5 MB)
Posted by Linn Ko at 3:55 PM No comments:
Download Apk Here (18.4 MB)
Posted by Linn Ko at 2:43 PM No comments:
Download Apk Here (9.2 MB)
Download Unlimited Apk Here (9.7 MB)
Posted by Linn Ko at 2:40 PM No comments:
Download Apk Here (43 MB)
GTA Sanandreas Game ရဲ.နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ GTA Sanandreas Superman Mod ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပထမထွက်တဲ့ ဟာထက်ကိုပိုဆော့ကောင်းတယ်။ ထူးခြားချက်က Cheat ခိုးစရာမလိုဘဲ ခုန်လိုက်ရင် အမြင့်ကြီးကိုရောက်ရောက်သွားတာပဲ ဟယ်ရီကော်ပတာတို. ကားတွေတို.
တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေရာအနှံကို မိမိ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက် Google Earth ဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ လကမ္ဘာကိုတောင် ကြည့်ခြင်ရင် ကြည့်လို.ရပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို.မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်တွေကိုတောင် ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးနဲ. ကြည့်လို.ရပါတယ်။
တကယ်ဆော့လို့ ရတယ်နော်။ Android ပေါ်မှာလို မထစ်တော့ပါဘူး။အဆင်ပြေတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂိမ်းခလုတ်တော့ ၀ယ်ရမှာနော်။ဒီတိုင်းဆော့တာ ဘာကီးခလုတ်နဲ့ မှ နှိပ်ဆော့လို့ မရဘူး။အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ဆင့်ခြင်း လုပ်ပါ။
ကဲ iOS 7.0.3 လာပါပြီဗျာ...ဒေါင်းလိုက်ကြပါဦး... သူ့ Official Site ကို မသွားဖြစ်ပဲ ကျွန်တော့်ဆီရောက်
လာကြတယ့် သူငယ်ချင်းများ... လိုအပ်တယ်ဆို တစ်ခါတည်း ယူသွားလိုက်ကြပါဦးလို့...
လာလည်တာကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...
Let's Download iOS 7.0.3
Posted by Linn Ko at 5:14 PM No comments:
When the battery is low, simply touch the icon to switch eco mode ON/OFF.
In eco mode, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, backlight, sound mode, vibration mode and synchronization will all be OFF. This can easily reduce battery consumption. (You can customize
I’m Calculator Plus – the perfect calculator for Android. I’m easy to use and beautifully designed
Posted by Linn Ko at 4:58 PM No comments:
A plugin of Next Launcher 3D to show number of missed calls, unread SMS,Gmail.
Next Notification is an independent plugin of Next Launcher. It can help you to be notified the number of unread messages for calls, SMS, Gmail. When you get any missed calls or
Posted by Linn Ko at 4:56 PM No comments:
Download Apk Here (10.5 MB)
Download Data Here (75.7 MB)
Download Apk Here (12.3 MB)
Posted by Linn Ko at 3:17 PM No comments:
Download Apk Here (16.7 MB)
Posted by Linn Ko at 2:22 PM No comments:
Download Apk Here (44.5 MB)
Posted by Linn Ko at 3:57 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 2:38 PM No comments:
Download Apk Here (38.8 MB)
Posted by Linn Ko at 2:20 PM No comments:
Download Apk Here (8.2 MB)
Download Data Here 126.6 MB)
Download HERE (42.2 MB)
Posted by Linn Ko at 2:29 PM 1 comment: